Icashile kakhulu, Ithule, indawo enokungena kwangasese - I-Airbnb
Icashile kakhulu, Ithule, indawo enokungena kwangasese
Maple Shade Township, New Jersey, i-United States
I-ikamelo lezivakashi ephelele ibungazwe ngu-Tom&Angela
U-Tom&Angela Ungumbungazi ovelele
I-inlaw suite esanda kulungiswa futhi inokungena kwangasese.Amakamelo okulala amabili, igumbi lokuphumula, ukugeza okugcwele kanye nekhishi. Konke kusha! Itholakala e-Maple Shade NJ ku-dead end street off road parking izimoto ezingu-8 kanye noma i-RV eduze komfula i-Pensauken. Iyimfihlo kakhulu futhi ithule. Ukushisa, isimo somoya, indawo yomlilo, i-wifi, ideski lekhompyutha ekamelweni elikhulu. Idekhi yomnyango engaphandle enombono omuhle! Umnikazi uhlala esizeni uma udinga okuthile ! Izindleko ezengeziwe zingasebenza ezifuyweni. sicela usazise kusengaphambili mayelana nezilwane ezifuywayo.
Konke kusuka kumathawula kuya kumalineni, setha ikhishi. Noma yini ozoyidinga. Ezimweni eziningi bekuhamba ngomzuzu nje! I-suite futhi inokukhanya kwe-LED kuwo wonke amagumbi. Ingasetshenziselwa ukukhanyisa ebusuku, Ukukhanyisa kweMood ngemibala engu-15 ongakhetha kuyo futhi ingasetshenziswa njengokukhanyisa Kwesimo Esiphuthumayo uma kwenzeka ukungasebenzi kwamandla! Bona izithombe ezinamathiselwe cishe ku-1200 Sq ft
5.0 · 69 okushiwo abanye
I-dead end Street ethule kakhulu etholakala emfudlaneni. Imizuzu nje kusuka kunoma yini oyifunayo! kuningi ongakwenza nokukubona. Amaminithi ukusuka e-NJ Turnpike, amaminithi ukusuka e-Philadelphia. Ihora elingu-1 ukusuka edolobheni lase-Atlantic.
We look forward to being your Host ! Angela & Tom
Ezimweni eziningi singatholakala 24/7 nganoma yisiphi isizathu.
UTom&Angela Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Maple Shade Township namaphethelo